Aprily 26, 2013 amin'ny 2:26 am
Toy izany ity &nbsp; tokony ka tsy tokony hoheverina? Koa satria ny farany upgrade, Aho mahita azy io ho anisan'ny safidy ny Fandikan farany teo anoloan'ny, Nahoana no?
Aprily 27, 2013 amin'ny 12:13 aho
Tsy tokony hahita azy eo amin'ny lafiny anoloana ny toerana, Raha mahita izany isika dia mifandraisa mivantana, ary ho hitantsika izay mahatonga ity.
Mey 31, 2013 amin'ny 9:20 aho
Izaho, dia izao no tena mora dika, Tsy Hanova amin'ny hafa.